Bogga ugu weyn » Wararka Safarka Ganacsiga » Guddiga Dalxiiska Seychelles waxay BRANDit u magacaabeen Wakiilka Hindiya
Guddiga Dalxiiska Seychelles waxay BRANDit u magacaabeen Wakiilka Hindiya
Golaha Dalxiiska ee Seychelles (STB) wuxuu u magacaabay BRANDit inuu noqdo wakiilka rasmiga ah ee Hindiya. Waxaa loo magacaabay inuu noqdo wejiga quruxda badan ee 115-jasiiradood oo ku yaal qaaradda Hindiya, kooxda BRANDit waxay maamuli doontaa suuqgeynta, iibka iyo Xiriirka Dadweynaha iyadoo ay hagayaan Xarunta Dhexe ee STB.
Sherin Francis, Madaxa Fulinta ee STB wuxuu sheegay in joogitaanka suuqa uu yahay mid muhiimad weyn leh, maadaama Hindiya ay weli tahay mid muhiim u ah suuqyada Seychelles. Waxay sii xustay in wadashaqeynta cusub ay bilow weyn u tahay 2021 ee STB.
“Waxaa jiray shaqooyin badan oo laga qabtay suuqa Hindiya, waan ku qanacsanahay sida halka loo socdo ay u aasaastay inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka waxaanan higsaneynaa inaan sii wadno xawaaraha. Waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno kooxda BRANDit si ay u hoggaamiso dadaalkeena suuq-geynta iyo isgaarsiinta ee Hindiya. Hindiya waa suuq rajo leh oo dabeecaddiisa firfircoon ee had iyo jeer isbeddelaysa ayaa had iyo jeer ka dhigtay goob ciyaaro xiiso leh oo loogu talagalay dadaalkeenna suuq-geynta dibadda. Seychelles waxay u adeegi doontaa hoy iyo baxsi shisheeye oo loogu talagalay baahida safarka ee safarka ah ee socdaalayaasha Hindida ah. Inkasta oo ay jirto caqabado 2020, waxaan ku qanacsanahay inaan ka soo baxno marxaladan si ka sii xoog badan oo ka sii wanaagsan, ”ayay tiri Mrs. Francis.
Waxaa jiray koror weyn oo ku yimid soo-booqdayaasha ka imanaya India iyadoo 502% koror lagu sheegay suuqa lixdii sano ee la soo dhaafay, iyadoo 1, 248 soo booqdeen sanadka 2019 iyo in kasta oo uu aafo ka dhacay 2020, halka loo socday laga diiwaan galiyay 914 qof oo ka yimid suuqa.
Lubaina Sheerazi, agaasimaha guud & aasaasaha, BRANDit ayaa intaas ku dartay, “Waxaan ku faraxsanahay inaan ku guuleysano waajibaadka iyo u adeegno wakiillo Hindi ah oo ka socda Golaha Dalxiiska Seychelles. Marka la eego dhacdada COVID, ujeedku waa in la gaaro soo-booqdayaasha ka hor-COVID iyada oo si weyn loo kordhinayo tirada dabaaldegyada si kor loogu qaado dalxiiska mid ka mid ah waddamada ugu wanaagsan qaaradda Afrika ”.
Mar ay ka hadlaysay qorshayaasha suuqgeynta suuqa Hindiya, Agaasimaha Suuqgeynta ee dalalka Asia, India iyo Australia, Mrs. Amia Jovanovic- Desir, waxay sheegtay in STB ay soo dhaweyn aad u diiran ka heshay la-hawlgalayaasha Hindiya.
Taageerada iyo wada shaqeynta adag ee la-hawlgalayaashayada ganacsiga, waxaan ku guuleysanay inaan si guul leh u dhigno bartilmaameedkeenna gaarka ah ee suuqa Hindiya. Waxaan kufashanay suuqa waxqabadyo xayeysiin kaladuwan oo xul ah sanadihii lasoo dhaafay waxaanan aaminsanahay inaan waxbadan kasoosaari karno suuqan. Hadafkeena ugu dambeeya ayaa ah in aan calaamadeyno oo aan ku darno magaalooyin cusub oo aanan wali gaarin ama aan gaarin si aan ugu baraarujino soo booqdayaal badan oo Hindi ah kuwaas oo raadinaya meel gaar ah sida Seychelles oo ah ciidaha nabada iyo nasashada ka dib markii uu cudurku dhammaaday. Tan waxaa lagu sameyn doonaa iyada oo loo marayo diirad gaar ah oo bartilmaameed ah iyo ololeyaal macmiil oo la xushay, tusaale ahaan, dallacsiinta internetka, YouTube, Facebook, Instagram taas oo sidoo kale gacan ka geysan doonta in la kordhiyo natiijooyinka, ”ayuu yiri agaasimaha Hindiya.
Xafiisyada BRANDit waxay ku yaalliin Mumbai iyo New Delhi kooxdana waa lala xiriiri karaa si aad u hesho macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Seychelles [emailka waa la ilaaliyay]
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan booqashada Seychelles https://www.seychelles.travel/en